ओलीले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्लान् ? « Drishti News – Nepalese News Portal
ओलीले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्लान् ?
२७ बैशाख २०७८, सोमबार ६ : ५४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । माधव नेपाल समूहलाई फकाउन सकेमा ठाकुर समूहलाई फकाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा प्रधानमन्त्री ओली देखिएको स्रोतले बतायो ।
संसदमा बहुमत पुर्याउन १३६ मत आवश्यक पर्दछ । एमालेमा माधव नेपाल समूहसहित १२१ मत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई सहमति गर्दै जसपाका ठाकुर समूहलाई फकाउन सोमबार संसद बस्नुअघि ओलीले कुनै अस्त्रको प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले त आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था आएमा ओलीले सांसद लुकाउन पनि सक्ने अनुमान गरेका छन् । कोरोना भाइरसको निहुँ पनि उनका लागि उम्कने बाटो हुनसक्ने उनको भनाई छ ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।